पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह कति धनी छिन् ? कति छ उनको सम्पत्ति ? – Sandes Post
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह कति धनी छिन् ? कति छ उनको सम्पत्ति ?
March 28, 2022 632
काठमाडौं – हिमानी शाहको जन्म अक्टोबर १, १९७६ मा भएको हो। हिमानी भारतको राजस्थानको शिखर राज्यका राजपुत विक्रम सिंह र विपुला सिंहकी पुत्री हुन्।
सूर्यवंशी सिखवत राजपूत उनले ग्यालेक्सी पब्लिक उच्च माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकी हुन्। तत्कालिन युवराज पारससँग विवाहबन्धनमा बाँधिएसँगै उनी अधिराजकुमारी भइन्।
दरबारहत्याकाण्डपछि ससुरा ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए, पारस र हिमानी राजउत्तराधिकारी। पूर्व अधिराजकुमारी भए पनि हिमानी सरल स्वभावकी देखिन्छिन्। देश गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएपछि उनी हिमानी ट्रष्टमार्फत समाज सेवामा सक्रिय छन्। तीन सन्तानकी आमा हिमानीको सौन्दर्यबाट प्रभावित नहुंने सायदै कोही होला।
विरलै संचारमाध्यमसँग बोल्ने हिमानीले नेपालका गरिब जनताका लागि साच्चिकै एक कवज जस्तै गरि उभिएकी छिन्। ट्रष्टमार्फत समाज सेवामा सक्रिय उनले धेरै मानिसले खोजेको कुरा भनेको उनको सम्पतिको हो। पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकि बुहारी पक्कै पनि उनको सम्पतिको कुरा गर्दा उनीसँग आफुलाई पुग्ने सम्पति रहेको छ।
कति छ हिमानी शाहको सम्पति?
सरल अनि शान्त स्वभाव भएकी हिमानी निकै धनी रहेको विभिन्न श्रोतले जनाएको छ। उनीसँग लगभग १० देखि १५ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै उनीसँग भएको अर्को सम्पति नाममा उनको कार रहेको छ। उनको कारको नाम मर्सिडीज बेन्ज हो जसको नेपाली मूल्य ३ करोड २० लाख रहेको छ। त्यस्तै उनीसँग अर्को कार ल्याण्ड रोवर रहेको छ जसको मूल्य भने ३ करोड २५ लाख रहेको छ। योबाहेक उनको अहिले अरु सम्पति भने बाहिर आएको छैन।
Prevपल शाहलाई जेल पठाएकै दिन पलको अर्को सशक्त भिडियो बाहिरियो, पलको कामको चौतर्फी चर्चा, हेर्नुहोस् भिडियो
NextAnnouncement ofajob vacancy in Qatar
मलेसिया प्रवेश गर्ने नेपालीलाई आयो यस्तो कडा नियम, यस्ता छन मापदण्ड !
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, चैत्र १० गते बिहिबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
साइप्रसको एक कम्पनीले माग्यो नेपाली कामदार तलब कति ?
पल शाहविरुद्ध थुनछेक बहस जारी, सरकारी वकिलले मागे १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय